Interesting Archives - Purakhabar
सावधान ! यस्ता खानेकुराले बढाउँछ तालु खुइलिने सम्भावना
एजेन्सी- मानिसको कपाल झर्ने कारण उसले खाएको खानेकुरा र गर्ने हेरचाहमा निर्भर रहन्छ । तालु खुइलिनु पनि एउटा रोग नै भएको चिकित्सकहरु बताउँछन् । कतिपयले तालु खुइलिनुलाई बुद्धि र विवेकको क्षमतासँग दाँज्ने गरेका छन् । तर, यो वास्तविकता होइन । खासमा तालु २ प्रकारले खुइलिन्छ । सिकाट्राइसियल र नन–सिकाट्राइसियल । सिकाट्राइसियलमा जन्मजात समस्या, सुन्निएको अवस्था, कोठी , चोटपटक वा क्यान्सरका कारण तालु खुइलिने हुन्छ । नन–सिकाट्राइसियलमा कहिलेकाहि सानो भाग मात्र खुइलिन्छ भने कहिले पूरा भाग नै । खुइरे भनिने सानो भाग खुइलिने रोग वंशाणुगत गुण, मानसिक रोग वा ढुसी संक्रमणका…
प्रेममा एक-अर्का प्रति वफादार रहन्छन् यी ४ राशिका मानिस !
कुनै पनि मजबूत प्रेम सम्बन्धको लागि आवश्यक हुन्छ एक-अर्का प्रति वफादार रहनु। यदि दुई मध्य एक पनि वफादार भएन भने त्यो सम्बन्ध धेरै समय टिक्दैन। आजकल त एक-अर्का प्रति वफादार कम मानिस मात्र हुने गर्छन्। एक-अर्का प्रतिको आकर्षणलाई प्रेम सम्झिन्छन्। यहि कारणले सम्बन्ध टुट्छ। ज्योतिष शास्त्रका अनुसार यी ४ राशिका मानिस प्रेममा निकै सच्चा तथा वफादार हुन्छन्। वृष राशि ज्योतिष शास्त्रका अनुसार वृष राशिका मानिसलाई आँखा चिम्लेर विश्वास गर्न सकिन्छ। यस राशिका मानिसहरू विश्वासयोग्य हुन्छन् र केवल भरोसायोग्य व्यक्तिहरूले सम्बन्धलाई अगाडि बढाउन सक्छन्। यो मात्र होईन, यिनीहरु आफू सम्बन्धलाई लएर…
यी हुन सक्छन, गर्भ नबस्नुका मुख्य कारणहरु
August 23, 2020 Sunil Khattri
कतिपय दम्पत्तिहरु गर्भ धारण नहुने समस्याका कारण पीडित रहेका हुन्छन् । गर्भ बस्न नसक्नुमा शारीरिक कारणका अतिरिक्त हाम्रो आनी बानीले समेत ठूलो प्रभाव पारेको हुनसक्छ । तर यस्ता सामान्य कुरामा हामी ध्यान दिँदैनौं । शारीरिक सम्पर्क गरे गर्भ बसिहाल्छ भन्ने धारणा रहेको छ । तर यो नै सत्य होइन । शारीरिक कारणहरु पनि कतिपय हल गर्न सकिने हुन्छन् । तर केही जटिल प्रकृतिका शारीरिक समस्यालाई भने सम्बोधन गर्न गारो पर्छ । वंशानुगत समस्या र पोलिसाइटिक ओभरी सिन्ड्रोमको जस्ता समस्याको उपचार कठिन हुन्छ । त्यस्तै ३५ वर्षभन्दा माथिको मानिसको यौन दुर्बलता…
कुनै पनि पूजा वा मन्त्रोच्चारणको सुरुवात ॐबाट हुने गर्छ । ॐको उच्चारणले भगवान मात्र खुशी हुने होइन्, यो मन्त्रको जपबाट मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्यलाई पनि फाइदा पुग्छ । हिन्दु धर्ममा ॐ लाई महामन्त्र मानिन्छ । ॐ उच्चारणबाट उत्पन्न हुने तरंगले दिमागलाई शान्त राख्न सहयोग पुर्याउँछ । यसले धेरै बिरामीहरु ठिक हुने कुरा वैज्ञानिक अनुसन्धानबाट प्रमाणित भइसकेको छ । १. थाइराइड : हरेक दिन ॐको उच्चारण गर्दा थाइराइडको समस्याबाट छुटकारा पाउन सकिन्छ । २. एन्जाइटी : ॐको उच्चारणले हाम्रो मानसिक स्वास्थ्यलाई धेरै फाइदा पुग्छ । यसको उच्चारणले तनाव, डरजस्ता समस्याबाट मुक्ति…
August 14, 2020 Sunil Khattri
काठमाडौँ। हरेक व्यक्तिले सुतेको समयमा सपना देख्नु एक सामान्य कुरा हो। हरेक दिन हामीले देखेको सपनाले हाम्रो जीवनमा ठूलो प्रभाव पार्ने गर्छ। प्राय मान्छेहरूले निन्द्राबाट उठ्दा आफूले देखेका सपनाहरू बिर्सिने गर्छन्। त्यसैले उनीहरूलाई सपनामा देखेका कुराहरूले जीवनमा पारेको असरबारे थाहा हुँदैन। ज्योतिष शास्त्रका अनुसार हरेक सपनाको केही अर्थ रहने गर्छ र यसले कुनैपनि व्यक्तिको भविष्यको सङ्केत गर्ने गर्दछ । प्राय मान्छेहरू रातको समयमा देखेको सपना बिहान उठ्नासाथ आफ्ना परिवारका अन्य सदस्यलाई सुनाउने गर्छन् । यसरी आफूले देखेका सपना सुनाउने गर्दा के हुन्छ? यदि आफूले देखेका केही अचम्मलाग्दा सपनाहरू निन्द्राबाट बिउँझिने…
पुरुषका यस्ता गुणबाट प्रभावित हुन्छन महिलाहरु!
महिलाहरु आफ्नो जीवनसाथी होस् वा प्रेमीमा राम्रो गुण होस् भन्ने पक्कै चाहन्छन्। केहि यस्ता गुणहरु छन् जुन गुण भएका पुरुष महिलाको लागि निकै प्रिय हुन्छन्। हरेक महिला आफ्ना प्रेमी वा जीवनसाथीमा यस्ता गुण खोज्छन्। महिलाका यी कुरा जान्नु पुरुषको लागि निकै जरूरी हुन्छ। व्यवहार पुरुषले महिला, उनका साथी र उनको परिवारलाई कस्तो व्यवहार गर्छ, यो कुरामा महिलाले विशेष ध्यान दिन्छन्। यदि कुनै पुरुष महिलाको साथी तथा परिवारलाई स्नेह तथा सम्मान गर्छ भने महिलालाई यो कुरा धेरै मन पर्छ। ईमानदारी आफ्नो प्रेमीबाट एक महिला ईमानदारीताको अपेक्षा गर्छिन्। उनीहरु चाहन्छन् कि उनको…
August 11, 2020 Sunil Khattri
इटहरी / पछिल्लो गीत ‘के माया लाग्छ र ?’ का कारण चर्चामा रहेका गायक निशान भट्टराईले विवाह गरेका छन् । मंगलवार कृष्णा जन्माष्टमीको अवसर पारेर उनले प्रेमिका ऋचा न्यौपानेसँग कानुनी विवाह गरेका हुन् । उनीहरु लामो समयदेखि प्रेम सम्बन्धमा थिए । निशान र ऋचाले काभ्रेस्थित धुलिखेल जिल्ला अदालत पुगेर विवाह गरेका हुन् । उनीहरुको नेपाल बार एशोसियनका पूर्व अध्यक्ष समेत रहेका अधिवक्ता रमेश हुमागाईंले कानुनी रुपमा विवाह गराएको जानकारी प्राप्त भएकाे छ । पहिलो नेपाल आइडलका फस्ट रनरअफ समेत रहेका निशान भट्टराई अहिलेका व्यस्त गायकमध्ये एक हुन् । छोटो समयमा…
हिन्दुमहिलाहरुको महान पर्ब हरितालिका तीज नजिकिदै गर्दा आम दर्शकको माझमा विभिन्न खाले गीत संगीत बजारमा सार्बजनिक हुदै गर्दा कति मौलिक गीत छन् भने कति छाडा र अपाच्य खालका पनि गीत छन् तर अविरल फिल्म्सले आफ्नै प्रस्तुतिमा र बजार ब्यबस्थापनमा अत्यन्तै दर्शकको मन जित्ने खालको गीत “भुरुरु उडेको चरी ” बजारमा ल्याएको छ l सार्बजनिक भएको छोटो समयमै टिकटकमा सोहि गीतका सम्पूर्ण टुक्का भाइरल भएका छन् , देवी घर्ती, पुरुषोत्तम गैरेको स्वर रहेको तीज गीतमा पुरुषोत्तम गैरेकै लय रहेको छ भने बिमल पौडेलको सब्द रहेको छ l बिबाहित जोडीको माया प्रेमलाइ…
यसरी बनाउनुहोस् स्वादिलो क्वाँटी
August 3, 2020 Sunil Khattri
आज जनैपूर्णिमा, काँधमा जनै र हातमा डोरो बाध्नुका साथै घर घरमा क्वाँटी खाने प्रचलन धेरै पहिलेदेखि चलिआएको छ । क्वाँटी खाने प्रचलन खासगरी नेवार समुदायमा बढी छ तर पछिल्लो समय सबै समुदायमा यसको लोकप्रियता बढेको छ । प्रत्येक श्रावण शुक्ल पूर्णिमा अर्थात जनै पूर्णिमाको रातमा क्वाटी खाने गरिन्छ । क्वाटी जनै पूर्णिमाको विशेषता पनि हो । नेवारी भाषामा क्वाँ भनेको तातो हो भने टि भनेको झोल हो । त्यसैले क्वाटीको खास अर्थ तातो झोल पदार्थ भन्ने हुन्छ । क्वाँटी विभिन्न गेडागुडीबाट बनाइने हुनाले यो परिकार पोषणले भरिपूर्ण हुन्छ । बर्खाको…
July 30, 2020 Sunil Khattri
अमेजन कम्पनीका संस्थापक तथा सीईओ जेफ बेजोस अहिले विश्वका सर्वाधिक धनी व्यक्ति हुन् । उनै बेजोसले अमेजन कम्पनी स्थापनाकालका संघर्ष तथा आफ्नो व्यक्तिगत जीवनका विषयमा विभिन्न तथ्यहरुको खुलासा गरेका छन् । अमेरिकी कंग्रेसमा भएको सुनुवाइका क्रममा उनले अमेजन कम्पनीको स्थापना गरी हालको अवस्थासम्म ल्याइपुर्‍याउँदासम्मको विगतसमेत कोट्याएका छन् । न्युयोर्कस्थित एक इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीको राम्रो पारिश्रमिक सहितको जागिर छाडेर सन् १९९४ मा बेजोसले अमेजन कम्पनी स्थापना गरेका थिए । कांग्रेसको वाणिज्य तथा प्रशासनिक कानून सम्बन्धी उपसमितिमा दिएको बयानका क्रममा उनले भनेका छन्, ‘दशौँ लाख शीर्षकसहित अनलाइन बुक स्टोर स्थापना गर्ने अवधारणा जो…